Siyaasi CCWarsame oo soo bandhigay halista uu leeyahay Covid-19 & Farriina u diray madaxda DFS | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Siyaasi CCWarsame oo soo bandhigay halista uu leeyahay Covid-19 & Farriina u...
Siyaasi CCWarsame oo soo bandhigay halista uu leeyahay Covid-19 & Farriina u diray madaxda DFS
Muqdisho (Halqaran.com) – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ka hadlay halista Soomaalida iska indha-tireysa ee bad qabka Caafimaad iyo saameynta uu reebi karo Cudurka Coronovirus.
Halka hoose ka akhriso qoraalka Siyaasi CCWarsame:
Waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladda in ay shacabka horyimaadaan, hoggaanna muujiyaan, si shacabka ay u helaan xog sugan oo la xariirta Fayraska Karoona. Hawshan hoggaankeeda kuma filna wasaarad, adduunka oo idilna madaxda sare ayaa hoggaamineysa dadaalka lagula tacaalayo Karoona Fayris. Waxay ahayd in horay loogu diyaargaroobe, dhowr jeer oo horena hoggaanka dawlada waan xasuusinay, laakiin talaabooyin wax ku ool ah lama qaadin . Haddaba waa in talaabooyin kan siyaasadeed iyo farsamo degdeg loo qaado.
Kaalinta hoggaanka siyaasadeed waa in:
faafida cudurka Corona
halis Soomaalida iska indha tireyso
Siyaasi C/raxmaan C/shakuur